बिश्वका महंगा यौनकर्मीहरुको रेट एक रातको कति ? - Lekbesi Khabar
बिश्वका महंगा यौनकर्मीहरुको रेट एक रातको कति ?
एजेन्सी : प्रायः मानिसहरुको स्वभाव नै हुन्छ, को मानिसहरु के मा चढ्छन् ? कस्ले के खान्छ ? कस्तो घरमा बस्छन् र यहाँसम्मकी कस्को मासिक तलब कति छ ? प्रायः हामीहरुलाई यिनै कुराहरुको खुल्दुली भइरहन्छ ।
जस्ट कास्सान्द्रा पनि महँगा यौनकर्मिहरु मध्येकै एक हुन् । उनी ग्राहकको चाहाना अनुसार नभएर आफ्नो चाहाना अनुसार ग्राहकहरु छान्ने गर्छिन् । उनी आफुले छानेको ग्राहकसँग मात्र रात बिताउँछिन् । उनको एक रातको मुल्य ३ हजार डलर रहेको छ ।
महँगा यौनकर्मीहरुको सूचीमा परेकी अर्की यौनकर्मी हुन् आश्ले ड्रप्रेर (क्रिश्टेन) । उनीसँगै सुत्न ग्राहकहरुले एक रातको ४ हजार ३ सय डलर खर्च गर्नु पर्छ ।
एमएस माया ब्लु सेक्सका साथसाथै आफ्ना ग्राहकहरुसँग नयाँ नयाँ ठाउँमा जान रुचाउँछिन् । नयाँ नयाँ ठाउँमा गएर रमाइलो गर्नु उनको सौख नै हो । उनी आफ्ना ग्राहकहरुसँग एक रातको ४ हजार ५ सय डलर लिने गर्छिन् ।
२७ मंसिर २०७६, शुक्रबार ०८:१८ December 13, 2019
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्ड आजदेखि दैनिक ४ घण्टा बन्द हुने